Kanto Archives - Neo Mars International
Your Name မှ နေရာများဆီသို့ တစ်ခေါက်
September 15, 2021 November 13, 2021 by adminin Articles, Travel
သတိပြုပါ: Your Name (君の名は。) ဆိုတဲ့ Anime ရုပ်ရှင်ကို မကြည့်ရသေးတဲ့ သူအနေနဲ့ ယခုဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုရန်မသင့်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းနဲ့ ဇာတ်ကွက်တချို့ကို ဖေါ်ပြမှာမို့ ရုပ်ရှင်မကြည့်ရသေးရင် မဖတ်သေးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဒီ ဆောင်းပါးလေးကတော့ KANAE NAKAMINE ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ် နွေရာသီ၊ ဂျပန်ကို အလည်ရောက်တုန်းက ဘုရားဖူးထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ဘုရားဖူးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တင်စားပြောတာပါ။ ဘာသာရေးနဲ့ မဆိုင်ပဲ Anime ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို စွဲလမ်းနှစ်သက်ကြတဲ့ သူတွေ တင်စားပြောကြတဲ့ ဘုရားဖူးမျိုးပါ။ ရုပ်ရှင်ထဲက၊ ဇာတ်လမ်းတွေထဲက နေရာတွေကို အစွဲလမ်းပြေ သွားကြည့်တာ၊ သွားလည်ပတ်တာမျိုးပေါ့။
PILGRIMAGE TO HOLY OR SACRED PLACES; ALSO ANIME PILGRIMAGE
ဒါပေမယ့် တကယ့်ကို ရုပ်ရှင်ကို စွဲလမ်းနှစ်သက်သွားကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ကတော့ ဘုရားဖူးခရီးစဥ်လိုမျိုးကို တင်စားပြောနေကြတာပါပဲ။
ဒါကြောင့်လည်း ဂျပန်လူမျိုးတွေက ခုလိုမျိုး Anime ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေထဲက အပြင်မှာရှိတဲ့ တကယ့်နေရာတွေဆီသွားလည်ပတ်တဲ့ အပြုအမူကို seichijunrei 聖地巡礼せいちじゅんれい လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာနေပါလိမ့်မယ်။ ( ဒီစကားလုံးကိုတော့ မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေဆီကို အလည်အပတ်သွားတဲ့ အခါမျိုးမှသာ ရည်ညွှန်းပြီး သုံးတာပါ။)
တချို့သူတွေ Anime ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ဘယ်လောက်စွဲလမ်းနှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတာကိုသာ နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် ခုလို အလည်အပတ်ခရီးစဥ်မျိုးကို ဘုရားဖူးနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ပြောဆိုတာမျိုးကို မလွန်လောက်ဘူးလို့ တွေးမိကြမှာပါ။ Your Name (君の名は。) ဇာတ်ကားလေးကိုတော့ ကျမ အပါအဝင် စွဲလမ်းနှစ်သက်သူတွေ အလွန်များပြားတာမို့ ခုဆောင်းပါးရေးဖြစ်သွားတာလည်း ပါပါတယ်။
တိုကျိုရဲ့ လှပတဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ရှုကွက်အဆန်းတွေကနေ ဒါရိုက်တာ Shinkai Makoto က ရင်သပ်ရှုမောရလောက်အောင်ကို တင်ဆက်ခဲ့တာပါ။ အသေးစိတ်တိကျလွန်းတာအပြင် စိတ်ကူးယဥ်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုလည်း ကြည့်မိတဲ့သူတိုင်း စွဲလမ်းကုန်ကြပါတယ်။ တိုကျိူမှာနေနေတဲ့သူတွေ၊ နေဖူးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲကနေရာတွေဟာ စိတ်ကူးယဥ်စရာ၊ တသသပြောစရာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။
Your Name ဇာတ်ဝင်ခန်းများရဲ့ နေရာများပြ မြေပုံ
SALON DE THÉ ROND (10:55–11:45 A.M.) *CLOSED ON TUES.
THE NATIONAL ART CENTER (11:45–12:45 A.M.) *CLOSED ON TUES.
TOKYO CITY VIEW IN ROPPONGI HILLS (1:00–2:00 P.M.)
YOTSUYA STATION (2:25–2:40 P.M.)
ON THE WAY TO SUGA SHRINE (2:40–3:20 P.M.)
SUGA SHRINE STAIRS (3:20–4:00 P.M.)
MEIJI MEMORIAL PICTURE GALLERY (4:20–4:30 P.M.)
AROUND SHINANOMACHI STATION (6:00–6:30 P.M.)
YUNIKA VISION (6:50–7:10 P.M.)
SHINTOSHIN PEDESTRIAN BRIDGE NEAR TAKARAZUKA UNIVERSITY (7:20–7:40 P.M.)
INTERSECTION BEHIND SHINJUKU POLICE STATION (7:45–8:00 P.M.)
CAFE LA BOHÉME NEAR SHINJUKU GYOEN (8:30–10:00 P.M.)
ခု‌ဆောင်းပါးထဲမှာတော့ ကျမသွားလည်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲမှာပါတဲ့ အပြင်ကနေရာတွေကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကို နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ တိုကျိုကိုသာရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သွားလည်ပတ်လို့ မမှားနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးတွေပါ။
ခရီးစဥ်ကို မစတင်ခင်မှာတော့ သတိပြုရမှာလေးတွေ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာလေးတွေရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ဖေါ်ပြပေးထားတဲ့နေရာတွေက တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ အတော်နီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လမ်းလျှောက်သွားတာကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တိုကျိုမှာလမ်းလျှောက်ရတာကတော့ ခုမှ ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက်က ပျော်ဖို့ကောင်းမှာပါ။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်သွားတဲ့အချိန်က နွေရာသီဆိုရင်တော့ အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ထီး၊ ဦးထုပ်၊ နေကာမျက်မှန် စသဖြင့်လိုပါလိမ့်မယ်။ (ဂျပန်နွေရာသီဥတုက အတော်လေးပူပါတယ်။)
သွားလည်တဲ့အချိန်တွေကိုလည်း ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲမှာပါနေတဲ့ အချိန်တွေအတိုင်း ဖြစ်အောင် အနီးစပ်ဆုံးအံကိုက် လုပ်ထားပါတယ်။ (ဒါက ဇူလိုင်လတုန်းကသွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ်လမ်းကြောင်းဆွဲထားတာပါ။ ဂျပန်မှာ ရာသီအလိုက် ဘတ်စ်ကား၊ ရထားတွေ ခရီးစဥ်အချိန်အပြောင်းအလဲ ရှိတတ်တာမို့ ကိုယ်သွားမယ့်အချိန်ရဲ့ အချိန်ဇယားတွေနဲ့ ပြန်ညှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။)
ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ အမှတ်တရအနေနဲ့ လူတိုင်းရိုက်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိပြုရမှာက တိုကျိုမြို့ဟာ လူနေအလွန်ထူထပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လိုပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့သူတွေ ဘေးဘီမှာ စောင့်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေရာတစ်နေရာရရင် အချိန်အကြာကြီး နေရာယူထားမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ သူများတွေလည်း အချိန်ကိုက် ကိုယ့်လိုပဲ ပုံလှလှလေးတွေ ရချင်မှာပေါ့လေ။
သူများတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကင်မရာချိန်ထားရင်တော့ အရှေ့က လုံးဝမဖြတ်သင့်ပါဘူး။ ဒါက ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ လူတိုင်းနီးပါးလေးစားကြတဲ့ ကျင့်ဝတ်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ စွဲလမ်းနှစ်သက်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းနေရာလေးကို ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီး ပျော်ကြမှာ လူတိုင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိပြုရမှာက အဲဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ၊ နေရာ‌ဒေသမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အော်ဟစ်ဆူညံတာမျိုးတော့ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပဲ အလှတရားကို ခံစားကြရအောင်ပါ။
ဒီမြေပုံလေးထဲမှာတော့ နေရာတွေကို အတိအကျထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဂျပန်မှာကတော့ ဘယ်နေရာကိုသွားသွား Google Map က ဖေါ်ပြပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ တိကျမှန်ကန်ပါတယ်။ ရထားထွက်ချိန်၊ ဆိုက်ချိန်၊ ဘတ်စ်ကား အတိအကျမြင်ရမှာပါ။
ခရီးစဥ်လေးကို စလိုက်ပါပြီ။ Taki က သူ တိတ်တခိုးစွဲလမ်းနေရတဲ့ Okudera-senpai နဲ့ ပထမဦးဆုံးချိန်းတွေ့တဲ့ Roppongi က နေရာလေးတစ်ခုကနေ ခရီးစဥ်ကို စတင်လိုက်တာပါ။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ သူတို့ စချိန်းတွေ့တဲ့နေရာက Roppongi Hills ကနေစတာပါ။ ဒါပေမယ့် ခုခရီးစဥ်လေးမှာတော့ သူတို့ နေ့လည်စာစားခဲ့ကြတဲ့ ကဖေးလေးကို သွားရအောင်ပါ။ အဲဒီဆိုင်လေးကို Salon de Thé Rond လို့ခေါ်ပါတယ်။ တိုကျိုရဲ့ အမျိုးသားအနုပညာခန်းမကြီး (National Art Center) ရဲ့ ဒုတိယထပ်မှာပါ။
ဆိုင်မှာသုံးထားတဲ့ ဖန်ခွက်တွေ၊ ခွက်အောက်ခံ coaster တွေက ရုပ်ရှင်ထဲက အတိုင်းကွက်တိပါပဲ။ ပန်းကန်တွေရောပဲ !
အဆောက်အဦထဲဝင်ဖို့ ဝင်ကြေးမလိုပါဘူး။ ဒီအတိုင်းဝင်လို့ရပါတယ်။ ကဖေးဆိုင်လေးဆီတန်းသွားလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ မနက် (၁၁) နာရီကနေ စဖွင့်ပါတယ်။ ကဖေးဆိုင်လေးက ဒုတိယထပ်မှာဆိုပေမယ့်မြင်ကွင်းကောင်းအောင် တတိယထပ်အထိတက်သွားလိုက်ပါတယ်။ နေရာကောင်းကောင်းယူပြီးတော့ ကဖေးဆိုင်လေးကိုရော၊ နောက်ခံက အဆောက်အဦအတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ပါ ပါအောင်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။
(၁၁) နာရီ ‌ဒေါင်ကနဲဆိုတာနဲ့ နေ့လည်စာစားဖို့ စောသေးပေမယ့် ဆိုင်ထဲဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ ကျမက ပထမဆုံး ဝင်လာတဲ့ သူပဲ ! တစ်ခုပြောစရာရှိတာက ကဖေးဆိုင်လေးမှာရတဲ့ မီနူးကိုကြည့်လိုက်တော့ Taki နဲ့ Okudera-senpai တို့ စားတဲ့ ဟင်းတွေ မရှိပါဘူး။ ဒါနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဆင်မယ်ထင်တဲ့ဟာလေးကို မှာလိုက်ပါတယ်။ ဆန်းဒဝစ်ချ်နဲ့ ပြောင်းစွပ်ပြုတ်ရည်လေးပါ။ ဟင်းပမာဏအနေနဲ့ကတော့ နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေလောက်မှာပါ။
မပြောပလောက်တဲ့ အသေးအမွှားလေးပေမယ့် အံ့သြစရာပါ။ ဆိုင်မှာသုံးထားတဲ့ ဖန်ခွက်တွေ၊ ခွက်အောက်ခံ coaster တွေက ရုပ်ရှင်ထဲက အတိုင်းကွက်တိပါပဲ။ ပန်းကန်တွေရောပဲ !
နေ့လည်စာစားပြီးတာနဲ့ National Art Center ခန်းမထဲကို လျှောက်ကြည့်ပါတယ်။ ပြခန်းတွေထဲမှာ အနုပညာပစ္စည်းတွေ ပြသထားပေမယ့် ခုတစ်ခါကတော့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ Your Name ကို ကြည့်ထားပြီးသားမို့ မြင်ဖူးသလိုလိုရှိနေပေမယ့် သေချာလိုက်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ခန်းမကြီးက တော်တော်ခမ်းနားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကို သေသေချာချာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြခန်းခန်းမထဲက အသေးစိတ်လေးတွေကိုကအစ အထူးဂရုပြုပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ Anime ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဆိုတာကို လုံးဝလက်ခံလိုက်ရမှာပါပဲ။ Taki နဲ့ Okudera-senpai တို့က ဘေးနားလာကပ်ထိုင်နေသလားလို့တောင် ခံစားမိလိုက်ပါတယ်။
ကျမရောက်တုန်းကတော့ ပြပွဲလေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဘာလဲလို့ သွားကြည့်မိတော့ အရှေ့တောင်အာရှဘက်က အနုပညာလက်ရာအချို့ကို ပြသနေတာပါ။ ရုပ်ရှင်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးပေါ့လေ။ တကယ်က တိုကျိုမြို့ကြီးသူမြို့ကြီးသားတွေအနေနဲ့ Ropppongi က အနုပညာပြခန်းတွေဆီမှာ ချိန်းတွေ့တယ်ဆိုတာဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ Taki နဲ့ Okudera-senpai တို့ရဲ့ ကမ္ဘာလေးထဲမှာလည်း သူတို့ ဒီနေရာတွေမှာ ခြေလှမ်းတွေ ချခဲ့ကြမှာပါ။
နောက်တစ်နေရာကတော့ Roppongi Hills က ရှုခင်းကြည့် စင်မြင့်ပါ။ ခုခန်းမကနေ အဲဒီအထိကို လမ်းလျှောက်ရင် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်တော့ ကြာနိုင်ပါတယ်။
Roppongi Hills ဆိုတာ ဆိုင်တွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ နာမည်ကြီး ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ စည်ကားလှတဲ့နေရာပါ။ Your Name ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Taki နဲ့ Okudera-senpai တို့ဟာ Tokyo City View လို့ ခေါ်တဲ့ နေရာဆီကို သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခုကတော့ အခမဲ့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဝင်ကြေးက ယန်း ¥1,800 တောင်မှပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဝင်ကြည့်ချင်စိတ်ကတော့ ထိန်းမရတော့ပါဘူး။
ကျမသွားတုန်းကတော့ ကံသိပ်မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ အထဲမှာ ပြန်ပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့ အပိုင်းတွေရှိနေတာမို့ ရုပ်ရှင်ထဲကနဲ့ ကွက်တိကျနိုင်မယ့် ပုံလေးတွေမရခဲ့ပါဘူး။ ပြီးတော့ LDC တီဗီဖန်သားပြင်တွေက မြင်ကွင်းကျယ်ကြီးကို နည်းနည်းရှုပ်နေသလိုလည်း ခံစားမိပါတယ်။
Your Name ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Taki နဲ့ Okudera-senpai တို့ဟာ Tokyo City View လို့ ခေါ်တဲ့ နေရာဆီကို သွားခဲ့ကြပါတယ်။
အမှန်က တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်လေးတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျမအတွက်က Tokyo City View ကို ရောက်တာ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီတော့ တိုကျိုရဲ့ အပေါ်စီးရှုခင်းကို တိုကျိုတာဝါအထိလှမ်းမြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းက တကယ်မမေ့နိုင်စရာပါပဲ။
အချိန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ အောက်ထပ်မှာရော ခုအထပ်မှာရော အနုပညာလက်ရာပြခန်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ကျမဝယ်ထားတဲ့ ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ထဲမှာ အောက်ထပ်က ပြခန်းဝင်ခွင့်ပါ ပါပြီးသားမို့ ဝင်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
နောက်တစ်နေရာကတော့ နည်းနည်းလှမ်းပါတယ်။ ဒီတော့ ရထားစီးဖို့လိုပါတယ်။ Roppongi ဘူတာကနေ Ōedo line က ရထားကို စီးရမှာပါ။
ဒီဘူတာကတော့ Taki နဲ့ Okudera-senpai တို့ ချိန်းတွေ့တဲ့နေရာလေးပါ။ မှန်ပါတယ်။ ကျမသွားတဲ့နေရာတွေက ဇာတ်ကားထဲက အစီအစဥ်နဲ့ နည်းနည်းလွဲနေတာပါ။ ဒါက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။ လူရှုပ်မယ့်အချိန်တွေကိုရှောင်ပြီး ပုံကောင်းကောင်းတွေရိုက်နိုင်ဖို့ အတွက်ခုလို စီစဥ်တာပါ။
Yotsuya ဘူတာက နောက်တစ်ခန်းမှာလည်း ပါပါသေးတယ်။ Taki နဲ့ Okudera-senpai တို့ တွေ့ပြီးတော့ လမ်းနည်းနည်လျှောက်၊ ပြီးတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က Itomori-chō အကြောင်းကို ပြန်ပြောကြတဲ့ အခန်းပါ။
အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘူတာကို Akasaka အပေါက်ကနေထွက်ပြီး နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါ…
အပေါ်က မြင်ကွင်းပုံလေးကို ရမှာပါ။
ပြီးတော့ ညာဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး…
Yotsuya ဘူတာက လူတော်တော်စည်တဲ့ ဘူတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတဲ့အခါမှာ လူတွေကိုတော့ သတိထားရှောင်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်တစ်နေရာအနေနဲ့ Suga ဘုရားကျောင်းဘက်ဆီသွားပါမယ်။ တိုက်ရိုက်သွားရင်တော့ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ပဲကြာမှပါ။ ကျမက လမ်းတစ်ဖြတ်မှာ ရုပ်ရှင်ထဲကနေရာလေးတွေမှာ ဟိုတစ်ထောက် ဒီတစ်ထောက် ဝင်ဝင်ကြည့်ပါသေးတယ်။
Yotsuya ဘူတာနဲ့ Suga ဘုရားကျောင်းကြားထဲက နေရာတွေကတော့ Your Name ချစ်သူတွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပါ။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို ဆွဲ‌ခေါ်သွားပြီးတော့ မျက်ရည်ညှစ်ချမယ့် နေရာတွေပေါ့။ Taki နဲ့ Mitsuha တို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လိုက်ရှာကျတဲ့ အခန်းလေးရဲ့ နေရာလေးတွေပါ။
ဒီနေရာလေးကတော့ အဲ့ဒီနေရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ မှတ်မိလား ? မှတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ လေးစားပါတယ်။ ဒီအခန်းလေးက တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါတာပါ။ မှတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ အခေါက်ခေါက်ကြည့်ထားဖူးပုံရပါတယ်။
Yotsuya ဘူတာကနေပြီးတော့ Yotsuya Sanchōme ဘက်ကို ဦးတည်လမ်းလျှောက်ပါ။ Shinjuku Dōri ကို ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ Lawson စတိုးဆိုင်လေးတွေ့ပါဦးမယ်။ အဲ့ဒီကနေ ဘယ်ကိုချိုးလိုက်ရင် ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲက ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေနေရာကို မြင်ရမှာပါ။
အဲဒီနေရာလေးပြီးရင်တော့ Shinjuku Dōri ဘက်ကို ပြန်လှည့်ပါ။ ဆက်လျှောက်ပါ။
မလှမ်းမကမ်းမှာ Softbank ကိုမြင်ရပါမယ်။ ပြီးရင် Kinko’s ကိုပါတွေ့မှာပါ။ ဘယ်ထပ်ချိုးပါဦး။ ပြီးရင် ဆက်လျှောက်ပါ။
လမ်းဆုံလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဘေးမှာ စာတိုက်ပုံးလေးလည်း တွေ့ဦးမှာပါ။
လမ်းဆုံရောက်ရင်တော့ ဘယ်ဘက်က ကျယ်တဲ့လမ်းကိုသွားပါ။ ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲက နောက်တစ်နေရာကို ရောက်မှာပါ။
ဘုရားကျောင်းလှေကားတွေရှိတဲ့ လမ်းဆုံတွေလမ်းခွတွေနဲ့ နီးတဲ့နေရာလေးပါ။
ကျမရောက်ခဲ့တုန်းက ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲကအတိုင်းပဲ နေရာထပ်တူနီးပါးတူတဲ့ စက်ဘီးတစ်စီးပါရပ်ထားပါတယ်။ အစက စက်ဘီးကို နေရာနည်းနည်းရွှေ့ပြီး လုံးဝထပ်တူကျတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်အောင် ရိုက်ခဲ့မလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်နောက်မှ အတွေးဝင်သွားတယ်။ ဂျပန်မှာက သူမျးပစ္စည်းကို ခွင့်ပြုချက်မရပဲကိုင်တာက တကယ်က ရိုင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတိုင်းလေးပဲ ရိုက်ခဲ့တာပါ။
ခရီးစဥ်တစ်ခုလုံးရဲ့ တကယ့်အသက်နေရာကို ရောက်ပါတော့မယ်။
ဘုရားကျောင်းလှေကားထစ်တွေက ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးရဲ့ အသက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Your Name ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးရဲ့ ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံး ဗဟိုချက်နေရာလို့လည်း တချို့ကပြောကြပါသေးတယ်။ ပိုစတာတွေ၊ Anime ချစ်သူတွေ၊ TV ကြော်ငြာတွေမှာလည်း မကြာခဏမြင်နေရတဲ့ မရိုးအီနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါပဲ။
ကြော်ငြာတွေမှာတွေ့တဲ့ပုံ (Taki နဲ့ Mitsuha တို့ရဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပုံလေး) က ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ အတိအကျပြန်မထည့်ထားပါဘူး။ ပြီးတော့ လှေကားရဲ့ ညာဘက်က အဆောက်အဦရှုခင်းတွေက အပြင်လောကမှာတော့ နည်းနည်းကွဲပါတယ်။ Anime ဖန်တီးတဲ့သူတွေရဲ့ ပိုအသက်ဝင်အောင်ဖန်တီးတတ်တဲ့ အနုပညာတစ်ခုပဲ ထင်ပါတယ်။
ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲက မြင်ကွင်းကတော့ အပြင်လောကနဲ့ ပိုပြီးနီးစပ်ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းလှေကားထစ်တွေက ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးရဲ့ အသက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Your Name ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးရဲ့ ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံး ဗဟိုချက်နေရာလို့လည်း တချို့ကပြောကြပါသေးတယ်။
ကျမ ‌ရောက်သွားတဲ့ အချိန်တုန်းက အခြားလာလည်ကြတဲ့ ဂျပန်အထက်တန်းကျောင်းသူတွေ၊ တရုတ်ခရီးသွားတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့တွေလည်း ကျမ လိုပဲ ဒီခရီးကို စီစဥ်လာခဲ့ကြတယ်နဲ့တူပါတယ်။ ပုံလေးတွေ အမြန်ရိုက်ပြီး အခြားဘက်ဆီခြေဦး သွက်သွက်လှည့်ကုန်ကြတာပါ။
Suga ဘုရားကျောင်းနေရာက တကယ်တော့ ဂျပန်မှာ သာမန်ရပ်ကွက်နေရာတစ်ခုပါပဲ။ Your Name ရုပ်ရှင်ထဲမှာသာ မပါလာခဲ့ရင် လူတွေတကူးတက လာလည်ဖြစ်ကြမယ် မထင်မိပါဘူး။ ဂျပန်အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓာတ်ပုံတွေ သေသေချာချာရိုက်နေတဲ့ ကျမကိုတွေ့တော့ လာမေးပါတယ်။ “ဘာလို့ နောက်က ဘုရားကျောင်းကို ဓာတ်ပုံမရိုက်ပဲနဲ့ လမ်းကိုချည်းပဲ ရိုက်နေတာလဲ” တဲ့။ သူကတော့ ဘုရားကျောင်းဆီကို ဆုတောင်းဖို့ လာတာလို့ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ Your Name ဇာတ်ကားလေးကြောင့် ကျမတို့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေထဲမှာ ကမ္ဘာလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာကို သူသိမယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒီနေရာလေးကနေ ကျမ မခွာချင်ပါဘူး။ တကယ်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကူးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ထိကိုင်နေရသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြားနေရာတွေဆီကို ဦးတည်ဖို့ ကျမ ထွက်လာလိုက်ပါတော့တယ်…
နောက်တစ်နေရာကတော့ Meiji Jingu Gaien-mae မှာရှိတဲ့ Meiji Memorial Picture Gallery ပါ။ Suga ဘုရားကျောင်းနဲ့ နည်းနည်းတော့ ဝေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းလျှောက်သွားလို့ရပါတယ်။ မိနစ် (၂၀) လောက်တော့ ခြေလှမ်းအပေါ်မူတည်ပြီး ကြာနိုင်ပါတယ်။
ဒီအခန်းကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းသွားအရ သိပ်အရေးမပါဘူးလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် Meiji Memorial Picture Gallery ကို ကျမ စိတ်ထဲတော့ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီနေရာလေးမှာ Mitsuha နဲ့ Taki တို့ ရုပ်ခန္ဒာပြောင်းလွှဲကြတဲ့နေရာလေးပါ။ Mitsuha ဟာ တိုကျိုမြို့ကြီးကို ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရလို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ ကျမ လိုပါပဲ။
ဒီပုံလေးကို ကြည့်တော့မှ Your Name ဇာတ်ကားဟာ ဘယ်လောက်အထိ အသေးစိတ်ကို ဂရုစိုက်ထားတယ်ဆိုတာကို မြင်ရမှာပါ။ ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲက ဘီယာကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်လေးက အပြင်မှာလည်း တကယ်ရှိနေတာပါ။ ဒါကို မမျှော်လင့်ပဲ သိလိုက်တာပါ။
နောက်တစ်ရာကိုတော့ နေဝင်ရီဖျိုးဖျချိန်လေး မတိုင်ခင်ရောက်ချင်တာမို့ Shinanochō ဘူတာဘက်ကို ပြန်သွားပြီး ကော်ဖီဆိုင်လေး တစ်ခုမှာ တစ်နာရီလောက်နားလိုက်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းဘက်မှာသာ လာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ခုလိုမျိုး နေဝင်ချိန်လေးကို နေ့တာတိုတာမို့ စောင့်စရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။
ကော်ဖီသောက်ပြီးတော့ လူလည်းလန်းသွားတာနဲ့ ခရီးစဥ်ကို ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ Shinanomachi ဘူတာဘက်က နေရာနှစ်ခုဆီကိုပါ။
ပထမတစ်ခုက Shinanomachi ဘူတာ ရှေ့ကလမ်းကို ဖြတ်ထားတဲ့ လူကူးခုံးကျော် တံတားတစ်ခုပါ။ ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ နှစ်ခါတောင် ပါပါတယ်။ အဆုံးသတ်ပိုင်းနားက Taki က Okudera-senpai နဲ့ တွေ့တဲ့ အခန်းတွေမှာပါ။
သစ်ပင်တွေနဲ့ တံတားတွေကတော့ အတိအကျနည်းပါး တူတူပါပဲ။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မပါတဲ့ အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုက နောက်မှာ ရှိနေတာပါ။
တံတားနားမှာတော့ Shinjuku/Yoyogi တဝိုက်မှာ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ အဆောက်အဦ ရှိပါတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာလည်းပါတဲ့ NTT Docomo Yoyogi တိုက်ကြီးပါ။
တံတားအဆင်းကို ဘူတာရှိတဲ့ ဘက်အခြမ်းကနေဆင်းလိုက်ရင် ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း မြင်ရတဲ့ အခြမ်းဘက်ကို ရောက်မှာပါ။
ခုတော့ Shinjuku ဘက်ကို သွားပါတော့မယ်။ JR Chūō လိုင်းက ရထားကိုစီးပြီးတော့ ခြောက်မိနစ်လောက်ဆိုရင် Shinjuku ဘူတာကိုရောက်ပါပြီ။
Shinjuku မှာ ပထမဦးဆုံးနေရာကတော့ Yunika Vision နေရာပါ။ တီဗီကြော်ညာတွေ၊ သတင်းတွေကို အဆက်မပြတ်ပြနေတဲ့နေရာပေါ့။ လူလည်း တော်‌တော်စည်ပါတယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲမှာတော့ Tiamat comet ကျလာတဲ့ အကြောင်းပြနေတာကို လမ်းသွားလမ်းလာတွေက စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ။
Shinjuku တဝိုက်က လူတော်တော်စည်ပြီး လမ်းသွယ်လေးတွေများတာကြောင့် ခုမှ ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ မျက်စိလည်စရာပါ။ Yunika Vision နေရာဆီကို ရောက်ဖို့ဆိုရင် Shinjuku ဘူတာကနေ ထွက်တဲ့အခါ east exit ကနေထွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အခြားဘက်အခြမ်းကို ရောက်သွားမှာပါ။ ဘူတာကနေ ထွက်လာပြီးတော့ ဘူတာကို ကျောပေးပြီး ဘယ်ဘက်ကို ချိုးပါ။ ပြီးရင် ရထားလမ်းနဲ့ အပြိုင် တည်တည့်ဆက်လျှောက်သွားပါ။ သုံးမိနစ်လောက်အတွင်း Yunika Vision ဆီကိုရောက်မှာပါ။
လူတအားများတာမို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တော့ သတိထားပါ။ (ဂျပန်မှာ ရာဇဝတ်မှုတွေ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ကိုယ်က ဓာတ်ပုံဆီကို အာရုံရောက်သွားပြီး လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို တိုက်မိတာ၊ ယာဥ် အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်တွေကိုပါ။)
ခုကတော့ Shinjuku ရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ကို သွားမှာပါ။ Yunika Vision ရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းက လမ်းဘက်ကိုပဲ ဆက်လျှောက်ပါ။ ခုံးကျော် ရထားလမ်းရှိတဲ့အောက်ဘက်ပါ။
ခုနှစ်မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာ လူကူးခုံးကျော်တံတားလေးကို တွေ့မှာပါ။
မှတ်မိလားတော့ မသိဘူး။ ဒီနေရာ‌လေးက Taki နဲ့ Mitsuha တို့ နှင်းတွေကြားထဲမှာ လမ်းလျှောက်တဲ့ အခန်းလေးပါ။ (ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ သူတို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သိတယ်လို့ ထင်နေကြမှာပါ။)
ရုပ်ရှင်ထဲကမြင်ကွင်းကို ထပ်တူနီးပါးလိုချင်ရင်တော့ Cafe Veloce နားမှာ ခဏရပ်လိုက်ပါ။
လူကူးခုံးကျော်တံတားလေးပေါ်ကို တက်လိုက်ရင်တော့ Your Name ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲပါတဲ့ နောက်တစ်နေရာကို ရောက်ပါပြီ။
မှတ်မိလားတော့ မသိဘူး။ ဒီနေရာ‌လေးက Taki နဲ့ Mitsuha တို့ နှင်းတွေကြားထဲမှာ လမ်းလျှောက်တဲ့ အခန်းလေးပါ။
ဇူလိုင်လမှာ ကျမရောက်သွားတာမို့ နှင်းတွေတော့ ကျမနေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်က ရေးထားတဲ့ စာတွေနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ကြည့်ကြည့်ပါဦး။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်က “Chonschon(?)” ဆိုပြီး လိုဂိုတစ်ခု မထင်မရှားနဲ့ပါ။ တကယ့်အပြင်မှာတော့ “Johnson” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လိုဂိုပါ။ နောက်မှ ထပ်ရှာကြည့်တော့ Johnchonschonson ဆိုတာက ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ ကံကောင်းတာက ကျမရောက်သွာတဲ့ အချိန်အထိ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းက မပိတ်သေးပဲ မီးလင်းနေတာမို့ ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲကနဲ့ တူတဲ့ ပုံတစ်ခုကို ရခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်နေရာကတော့ သိပ်မဝေးပါဘူး။ ငါးမိနစ် လမ်းလျှောက်စာပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေရာနား တဝိုက်က လမ်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေက ဆင်တူယိုးမှားလေးတွေမို့ လမ်းပျောက်မျက်စိလည်တာမျိုးတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Google Map က အတော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။
လူကူးခုံးကျော်တံတားကို ဆင်းတဲ့အခါမှာ ပုံထဲကလို ကွေးကွေးနဲ့ မြင်ရတဲ့ အဆောက်အဦဘက်အခြမ်းကနေ ဆင်းပါ။ (မြင်ရင်သိမှာပါ။) Family Mart နဲ့ Starbucks ဆိုင်တွေကို အဆောက်အဦရဲ့ ညာဘက်မှာ တွေ့ရမှပါ။ တည့်တည့်ဆက်သွားပြီး ပထမဆုံးလမ်းချိုးကိုရောက်ရင် ဘယ်ဘက်ကို ချိုးလိုက်ပါ။ LOVE ကို တွေ့တဲ့ အထိသွားပါ။ LOVE ဆိုတာကတော့ အမေရိကန်အနုပညာရှင် Robert Indiana ထုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်တုပါ။
LOVE ကို ကျော်သွားပြီးရင်တော့ နောက်တစ်နေရာကို ရောက်ပါပြီ။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ဒီမီးပွိုင့်ကို အမြန်ပြကွက်အတိုလေးနဲ့ ထည့်သွင်းထားတာပါ။ Mitsuha နဲ့ Taki ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ရုပ်ခန္ဒာအလွှဲအပြောင်းလုပ်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြန်သိလိုက်ရတဲ့ အခန်းမှာပါ။ Shinjuku တဝိုက်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ နောက်ခံ အဆောက်အဦဟာ Cocoon Tower ဆိုတာကို မြင်တာနဲ့ တန်းသိကြမှာပါ။
ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲကလို မြင်ကွင်းမျိုးလိုချင်ရင်တော့ Wide Angle Lens ကို သုံးမှရမှာပါ။ ပြီးတော့ ဒီပုံကို ရိုက်ဖို့အတွက်နဲ့ ကားလမ်းမပေါ်မတက်သင့်ပါဘူး။ တချို့လူတွေ ကားလမ်းမပေါ်တက်နေကြတာ တွေ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အလွန် အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ်။
နောက်တစ်ရာကတော့ နည်းနည်းလှမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ လမ်းပဲလျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာ နာရီဝက်လောက်ကြာသွားပါတယ်။ Shinjuku မှာ ညဘက် လမ်းလျှောက်ရတာ တော်တော်ပျော်စရာ ကောင်းတာပါ။
လမ်းမလျှောက်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ Nishi-Shinjuku ဘူတာကနေ Marunouchi လိုင်းက ရထားကို စီးပြီး Shinjukugyoen-mae ဘူတာမှာ ဆင်းလို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံး အခန်းနားကိုတော့ ရောက်လာပါပြီ။ Taki နဲ့ Okudera-senpai အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာပါ။ အပြင်မှာတော့ အဲ့ဒီနေရာက စားသောက်ဆိုင် Cafe La Bohéme (カフェ ラ・ボエム) နေရာပါ။
Your Name ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်က ပိုကြီးပြီး လူသွားလူလာ အရမ်းရှုပ်တဲ့ လမ်းဘေးမှာ ရှိတာပါ။ အပြင်မှာတော့ ဆိတ်ငြိမ်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ Shinjuku Gyoen ဘေးက နေရာလေးပါ။
စားသောက်ဆိုင်ကတော့ အလွယ်စား စားသောက်ဆိုင်မဟုတ်ပဲ Dress Code ရှိပါတယ်။ လာစားချင်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ရှိမှသာ အထဲကို ဝင်ခွင့်ပြုတာပါ။ (ဥပမာ – တီရှပ်တွေ၊ ဆွယ်တာဘောင်းဘီအပွတွေ၊ အိမ်နေစီး ညှပ်ဖိနပ်တွေနဲ့ ဝင်ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်မှာကတော့ သတ်မှတ်ချက်တွေရှိရင် သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာကြတာမို့ ဘာမှတော့ ပြဿနာ အထွေအထူးရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။)
ကျမရောက်တဲ့ အချိန်ကတော့ ည (၈) နာရီ ဖြစ်နေပါပြီ။ ညစာကို အဲဒီမှာပဲ စားလိုက်ပါတယ်။ လူလည်း သိပ်မများပဲ ဆိတ်ငြိမ်ပါတယ်။ (တိုကျိုမှာကတော့ စားသောက်ဆိုင်အတော်များများက နည်းနည်း ဆူပါတယ်။ ဒါကတော့ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ စတိုင်နဲ့ သက်ဆိုင်မယ်လည်း ထင်ပါတယ်။)
မှန်ပြတင်းပေါက် အကြီးကြီးတွေ၊ ဟင်းချက်ခန်းတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ယူနီဖေါင်းအရောင်တွေ စသဖြင့် အဲတာတွေက ကျမကို Your Name အကြောင်းကိုပဲ တွေးမိစေပါတယ်။ ပီဇာ တစ်ချပ်မှာလိုက်ပါတယ်။ စားကောင်းပါတယ်။
အခြားအစားအစာတွေလည်း အရသာမဆိုးပါဘူး။ ကောင်းတဲ့အထဲပါပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က ဒီလိုအနေအထားနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုက ကျမမျှော်လင့်ထားသဘောက်ကို စျေးမကြီးပဲ စျေးချိုတာပါ။ နောက်လည်း ကြုံရင်လာစားဖို့ တေးထားလိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒါတွေက တိုကျိုထဲက နေရာတွေပါ။ အခြားနေရာအချို့လည်း ကျန်သေးပေမယ့် တစ်ရက်တာ တိုကျိုကို လည်ပတ်ပြီး Your Name နဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေကို ရှာဖွေချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အတော်အသုံးဝင်မှာပါ။
တကယ်က တချို့ဆက်နွယ်မှုလေးတွေကို ကိုယ့်ဖာသာရှာဖွေပြီး ကြည်နူးရတာလည်း ပျော်စရာတစ်ခုပါပဲ။ ခုဆောင်းပါးထဲမှာပါတဲ့ အချက်တွေထက်ပိုပြီးတော့ ဆက်နွယ်မှု အသစ်တွေကိုလည်း တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်မှာပါ။
တိုကျိုကို အလည်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ Your Name အကြောင်းလေးကို တွေးမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
August 8, 2021 August 8, 2021 by adminin Kanto, Travel
Ghibli ပြတိုက်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ဆို ထပ်ရှင်းပြစရာမလိုအောင် ပြီးပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ဝင်္ကဘာလမ်းလိုမျိုး ပြတိုက်တွင်းမှာ စတုဒီယို Ghibliရဲ့ Anime တွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် ဇာတ်လမ်းတိုကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိပါတယ်။
Totoro ဇာတ်ကားကြည့်ဖူးသူတွေ အမှတ်ရကြမယ့်ဝင်ပေါက်လေး
August 7, 2021 November 13, 2021 by adminin Kanto, Travel1 Comment on ဟာချိကို (Hachiko)
တိုကျို ရှိဘုယရဲ့ တွေ့ဆုံကြဖို့ ချိန်းဆိုတဲ့နေရာအဖြစ် လူကြိုက်နှစ်သက်မှု တစ်ခဲနက်ရရှိထားတဲ့ ကြေးရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်။
တိုကျိုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ အုအဲနိုအဲအိဇာဘုရိုရဲ့ အချစ်တော်ခွေးလေးဖြစ်ပြီး ရှိဘုယဘူတာကို ‌နေ့တိုင်းသွားစောင့်ကြိုခဲ့ပါတယ်။ သခင်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာလဲ ဘူတာမှာ ပြန်မလာနိုင်တဲ့ သခင်ကို ဆက်စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဟာချိကို ခွေးလေးကို အစွဲပြုပြီး ကြေးရုပ်ထုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
အဲဒီ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ဟာချိခိုက အခုထိလည်း များစွာသောလူတွေရဲ့ အချစ်တွေကို ဆက်လက်ခံယူနေဆဲပါပဲ။
ဟာချိကို ( Hachiko ) ဆိုတဲ့ခွေးလေးကို ၁၉၂၃ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ Hachiko ရဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ အိဇဘုရို အုအဲနို ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ပါမောက္ခက သူ့ကိုစတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းမှာ ခြေထောက်ကနည်းနည်းကောက်နေတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပုံစံက ဂျပန်စကားလုံး ခန်းဂျီးအရဆိုရင် ဟချိဆိုတဲ့ ( 八)ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့တူတဲ့အတွက် ဟာချိကို ( Hachiko ) လို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါ ပါမောက္ခက သူ့သမီးကိုပေးဖို့အတွက် ခွေးလေးက လက်ဆောင်အနေနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့သမီးလက်ထပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ခင်ပွန်းနဲ့ သွားနေဖို့အတွက် ခွေးလေးကိုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါမောက္ခက သူများကိုပေးမယ့်အစား ယူမွေးထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟာချိကို က သူ့ရဲ့သခင်အလုပ်ကိုသွားတဲ့ မနက်တိုင်း ရှိဘုယဘူတာကို လိုက်ပို့ပါတယ်။ နောက်ပြီး သခင်ပြန်လာမယ့်ညနေတိုင်း ရှိဘုယဘူတာမှာ အမြဲသွားစောင့်ပါတယ်။
ဘူတာရုံမှာ သခင်ကို သွားစောင့်နေခဲ့တဲ့ ဟာချိကို
တစ်နေ့မှာတော့ ပါမောက္ခကြီးဟာ ရုတ်တရက် စာသင်နေရင်းနှလုံးရပ်ပြီးသေဆုံးသွားပါတော့တယ်။ ဟချိခိုလေးကတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိဘုရဘူတာမှာ စောင့်မြဲတိုင်းစောင့်နေပါတယ်။ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ဘူတာရုံကို သွားပြီးတော့ လူပေါင်းထောင်ချီကြားထဲမှာ သူ့သခင်ရဲ့ မျက်နှာကို နေ့တိုင်းရှာဖွေနေပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီရက်တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လတွေကနေ နှစ်တွေထိ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ သူ့သခင်ကိုစောင့်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ဘယ်နှစ်နှစ်လို့ထင်ပါသလဲ?
နှစ်ပေါင်း ၉ နှစ်ကြာပါတယ်။
အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် သစ္စာရှိလွန်းလှပါတယ်။ သူသေဆုံးခဲ့တာက အသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ သေဆုံးခဲ့တဲ့နေရာကတော့ ခါတိုင်းသခင်ကိုစောင့်နေကျနေရာ လေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းသစ္စာရှိတဲ့ခွေးဖြစ်တာကြောင့် တိုကျိုမြို့ မှာရှိတဲ့ အအိုယ စီရင်စု က သူ့ သခင်ရဲ့ အုပ်ဂူဘေးမှာမြှုပ်နှံပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟာချိကို ရဲ့ ရုပ်ထုကို ရှိဘုယဘူတာရှေ့မှာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ရုပ်ထုအောက်မှာတော့ မတ်လ ၉ ရက် ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ နှစ်တွေအများကြီးကြာသွားတာတောင် သစ္စာရှိတဲ့ခွေးလေးဖြစ်တဲ့ ဟာချိကို ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးက ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဦးမှာပါ။
နှင်းတွေကြားထဲက Hachiko ရုပ်တုလေး
Hachiko ကြေးရုပ်လေးရဲ့ အနီးကပ်
Shibuya Station အထွက်ပေါက်နား
JR Yamanote Line/Tokyu Toyoko Line/Tokyo Metro Hanzomon Line
August 7, 2021 August 7, 2021 by adminin Kanto, Travel
တိုကျိုရဲ့ လူကုံထံ အသိုင်းအဝိုင်း စုဝေးရာ
နာမည်ကျော် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေ၊ သန့်ရှင်းတောက်ပနေတဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေနဲ့ ဖက်ရှင်အသစ်တွေ…
တိုကျိုရဲ့ နာမည်ကြီး နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Mitsukoshi နဲ့ Matsuya တို့လို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖွင့်ထားတဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေအပြင် အဆင့်မြင့်ယန်းတစ်ရာဆိုင်နဲ့ အဆင့်မြင့်နာမည်ကြီးတံဆိပ်ဆိုင်တွေ တန်းစီရှိပြီး ခေတ်ဟောင်းစားသောက်ဆိုင်များ၊ Kabuki ပြဇာတ်ရုံစတဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ ရှင်သန်နေတဲ့ကြားမှာ ZARA နဲ့ Uniqlo စတဲ့ စျေးသက်သာတဲ့ လူငယ် ဖန်စီအသုံးအဆောင်တွေလည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ ရနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
Ginza ရဲ့ ညမြင်ကွင်း
လကုန်ရက်တွေနဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ လူများနိုင်ပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေး လည်ပတ်လိုသူတွေအနေနဲ့ ကြားရက်တွေမှာ သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်။